Mgbidi & Ihe osise
Mba ndị na-ekpo ọkụ
Ngwaọrụ BURLEY, nke hibere na 2006, na -emepụta ma na-emepe ngwa ọrụ ike ihe karịrị afọ iri na China. Site na ahụmịhe nke mbupụ na EU, America, Australia, Middle East na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na ngwaahịa ahaziri iche, ngwaahịa ọkachamara, anyị bụzi ndị ọrụ nrụpụta ọrụ ike na China.
Ka mma ịghọta ụlọ ọrụ anyị site na VR
isi ihe omume nke ika mmepe
Emebere Burley Ngwaọrụ. Na isi iji chepụta ma rụpụta igwe maka ngwaọrụ ike.
Ngwa Burley malitere imepụta na imepụta ngwa ọrụ ike, gụnyere ginder angle, chop chop, polisher and gun gun, drills.
Developga nke ọma mepụta usoro igwekota na igwekota ihe eji achọ mma, tumadi iji hụ na ahịa EU na America.
Chepụta ma mepụta DRYWALL SANDERS.
Bugharịa gaa n'ụlọ ọrụ ohuru nke nwere osisi dị 7000m2.Eguzobe ngalaba nke onwe.
Nweta nkwado na ọtụtụ ndị isi ama ama na ndị isi na-ere ahịa. Ngwaahịa na-abawanye ụba na-emezigharị ụlọ na mpaghara ụlọ.
Gbasaa ụlọ ọrụ ọhụrụ, yana ụlọ nyocha nnwale 500m2 nke anyị malitere iji.
Nọgidenụ na-abawanye na ngwaahịa iche; ỌH NEWR NEW ỌH toR to iji nweta ikike nrụpụta karịa.
Ejiri 19 usoro mgbakọ na 400000pcs na-emepụta ikike.More na ọtụtụ akụrụngwa akụrụngwa ejirila na usoro mgbakọ.
Plastic Ọgwụ Onodi
Anyị nwere ọkà ọrụ, ọgaranya-ahụmahụ imewe otu na-arụ ọrụ QC.
Machining Usoro Onodi
Onyinye nke igwe 15 + CNT na 24 + Digital akara ụmụ nwanyị. 230000 setịpụrụ kwa ọnwa.
Na ihe ọmụma nke Motors kemgbe afọ 1996. 7 rotor edoghi na 5 stator edoghi.350000 tent kwa ọnwa.
20000㎡ nkwakọba na ikike ikike nke 150000pcs maka emechara ngwaahịa.
Onodi na naa
100000pcs paddles kwa ọnwa, 150000 esetịpụrụ obere moto kwa ọnwa maka isi ngwaahịa, 10000 esetịpụrụ laser ọnwụ nonstandard akụkụ kwa ọnwa.
500㎡ ule ụlọ nyocha bụ ike ime EMC ROHS okpomọkụ ịrị eluAging ule maka plastic ahụ wdg.,
Tinye: South-Eastern Industrial Mpaghara, Shuxi Street, Wuyi County, Zhejiang
Copyright © 2021 BURLEY Ngwaọrụ Nka na ụzụ site MEEALL